Ungasithola Kanjani Isaphulelo Sezitshudeni se-YouTube Premium? - Izipesheli
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Sezitshudeni se-YouTube Premium?
I-YouTube isanda kwethula izinhlelo zezaphulelo zabafundi zokubhalisela kwabo eNdiya nakwamanye amazwe. Umculo we-YouTube Premium ne-YouTube ubhekela izingxenye zevidiyo nezomsindo ngokwahlukana.
Zombili izinsizakalo ziyatholakala kumadivayisi we-Android ne-iOS. Abafundi ababhalise emanyuvesi nasemakolishi aqinisekisiwe bangathola lezi zinsizakalo ngamanani ancishisiwe. Umuntu othola ubulungu be-premium ngentengo yesaphulelo angafinyelela kunguqulo engenazikhangiso yoqobo lwe-YouTube ne-YouTube.
Ngubani Ofanelekela ukuthola isaphulelo se-YouTube Premium Student?
Abafundi babhalise esikhungweni semfundo ephakeme esigcwele esigcwele eNdiya, kanti amanye amazwe angabhalisela isaphulelo sabafundi se-YouTube premium. Kodwa-ke, ukubhaliswa okunesaphulelo kwe-akhawunti ye-premium kusebenza iminyaka emine.
Abafundi futhi kudingeka baphinde baqinisekise i-akhawunti yabo nokufaneleka kwabo minyaka yonke.
Yini efakiwe esaphulelo se-YouTube Premium Student?
Abafundi bazothola isilingo samahhala senyanga eyodwa futhi badinga ukukhokha uhhafu kuphela wemali yokubhaliselwa yanyanga zonke. E-India, i-YouTube Music itholakala ngama-Rs 59 kuphela ngenyanga, futhi amasevisi wevidiyo ye-YouTube premium atholakala kuma-Rs 79 ngenyanga.
Kodwa-ke, akukacaci ukuthi lezi zintengo zesaphulelo zizofana kumadivayisi we-Android nakumadivayisi we-iOS noma cha. Isitshudeni esinamalungu we-premium singafinyelela kuzo zombili izinsiza, izinhlobo ezingenazikhangiso, nezindawo zokulanda umculo ukubukela ama-movie nokulalela umculo ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Izinyathelo Zokuthola Isaphulelo Se-YouTube Premium Student
I-SheerID iqinisekisa ukuqinisekiswa kwe-YouTube nokufaneleka kwayo. Ngaphambi kokusayina, hlola ukuthi ngabe isikole sakho sifakiwe yini ekhasini lobulungu babafundi be-YouTube Music Premium ne-YouTube Premium.
Uma isikole sakho sifakiwe dlulela phambili ukuze ubhalise bese ulandela lezi zinyathelo:
Vakashela isayithi le-YouTube Premium bese uqhafaza ekhasini lokufika. Okulandelayo, chofoza ku-Zama IT Mahhala.
Ngemuva kwalokho, umyalezo uzovela esikrinini oqondiswe kabusha ukuze uqinisekiswe ku-SheerID ngemuva kokuchofoza ku-continue.
Gcwalisa izwe, igama leyunivesithi, igama lokuqala, nesibongo. Futhi, qiniseka ukuthi ugcwalisa ikheli le-imeyili nosuku lokuzalwa. Chofoza ebhokisini ukuze uvumelane nenqubo yokuqinisekisa.
Bese uchofoza kokulandelayo ngemuva kokugcwalisa imininingwane.
Lapho ugcwalisa ifomu lokubhalisa, kwesinye isikhathi iSheerID ibheka imininingwane engaphezulu njengokuskena kwe-ID yabafundi, okulotshiweyo, kanye neminye imibhalo eminingi yaseyunivesithi. Udinga ukulayisha wonke amafayela bese uqhafaza ekuthumeleni.
Uma usuthumele ifomu, i-YouTube ithi, uzothola ukuqinisekiswa kwe-imeyili kungekudala kungakapheli imizuzu engama-29. Kwesinye isikhathi kuthatha amahora angaphezu kwama-48 ukuqinisekisa.
Uma ukuqinisekiswa kwe-akhawunti kuphumelele, i-SheerID izokuqondisa kabusha ibuyele ekhasini lokubhalisa le-akhawunti ye-premium ye-YouTube.
Lapha, udinga ukungena ngemvume ku-akhawunti ye-YouTube.
Chofoza kuphrofayli, khetha ubulungu obukhokhelwayo, bese ulandela imiyalo eyala esikrinini.
Khetha indlela yokukhokha. Ngemuva kwalokho, chofoza ekuqaleni kwenyanga eyodwa. Uma nje isivivinyo samahhala sesiphelile, khona-ke i-YouTube izokukhokhisa imali ekhokhwayo yanyanga zonke yokubhalisa ngamanani entengo
Yilokho abafana! uma wazi enye indlela yokuthi ungathola kanjani isaphulelo esiphezulu se-YouTube Premium usazise esigabeni sokuphawula ngezansi .. Siyabonga ngokufunda
Okunye Izaphulelo Zabafundi Ungabheka:
Tidal Student Isaphulelo
I-VPN ehamba phambili yeRoku (2020) - Iphephe Futhi Ithembeke Kakhulu
xbox bukhoma amakhodi egolide asebenzayo
yenza i-chromecast isebenza ne-laptop
ungayithola kanjani i-robux yamahhala engu-2018 kalula
Ngingathola umfundi obonakalayo uma sengivele ngine-premium
ungasakaza kanjani ideskithophu ku-chromecast windows 10